एसडीएफको साङ्गठनिक विस्तार जारी - Samay Dainik
अध्यक्ष चामलिङ जनसंवादमा व्यस्त
गान्तोक, 8 जनवरी।
एसडीएफ पार्टीले पार्टीका विभिन्न पदहरूमा नयाँ नियुक्ति गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष पवन चामलिङले पार्टी संविधानको धारा 26 र यसका विभिन्न प्रावधानले प्रदान गरेको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै यो नियुक्ति गरेका छन्।
पार्टीका प्रशासनिक मामिला महासचिव आमोस आर. लेप्चाद्वारा जारी गरिएको कार्यालय आदेशअनुसार पूर्व सिक्किम तादोङ लुम्से निवासी रिञ्जिङ दोर्जी चिङ्गपालाई पार्टीको प्रशासनिक मामिला महासचिव नियुक्त गरिएको छ। यसरी नै एस.के. प्रधानलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पार्टी अध्यक्षका सल्लाहकार नियुक्त गरिएको छ भने पार्टी अध्यक्षको कार्यालयमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष एन.के. प्रधानलाई नियुक्त गरिएको छ।
यसरी नै पूर्व मन्त्री तथा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डी.बी. थापालाई पूर्व जिल्ला प्रभारी साथै राजनैतिक मामिलाको भार प्रदान गरिएको छ। पूर्व मन्त्री सोनाम ग्याछो लेप्चालाई उत्तर जिल्ला प्रभारी साथै पार्टी मुख्यालयमा जनसम्पर्क अधिकारी नियुक्त गरिएको छ भने वित्त मामिला प्रभारीका रूपमा उपाध्यक्ष निमथित लेप्चालाई नियुक्त गरिएको छ। यसरी नै पूर्व मन्त्री छिरिङ वाङ्दी लेप्चालाई उपाध्यक्ष सोशल मीडियाको भार सुम्पिइएको छ भने सोशल मीडिया सचिवको पदमा जुडी राईलाई नियुक्त गरिएको छ। यसरी नै मेरिना लेप्चालाई पनि सचिव सोशल मीडिया पार्टी मुख्यालयको भार प्रदान गरिएको छ। पार्टी मुख्यालयमा जनसम्पर्क प्रभागमा सचिवको पदमा रञ्जु लामिछानेलाई नियुक्त गरिएको छ।
स्मरण रहोस्, नयाँ वर्षसितै एसडीएफ पार्टीले आफ्नो गतिविधिलाई अघि बढ़ाउन शुरू गरेको छ। यसअघि4जनवरीको दिन पनि पार्टीको उच्च समितिमा 10 -जनालाई नयाँ दायित्व सुम्पिइएको थियो। यसबाहेक पार्टी अध्यक्ष पवन चामलिङले विभिन्न स्थानको भ्रमण गरेर जनतासित संवाद पनि शुरू गरेका छन्।
एसडीएफ पार्टीले हाल सदस्यता ग्रहण गर्ने र सदस्यतालाई नवीकरण गर्ने कार्य पनि शुरू गरेको छ। पार्टीका धेरैजसो कार्यकर्ताले सदस्यतालाई नवीकरण गरिरहेका छन्। एसडीएफ पार्टीले आफ्नो सदस्यहरूलाई सदस्यता नवीकरण गर्न पनि निवेदन गरेको छ।
Total views : 1312024